Sentinel SLGR 1400X rido - Shiinaha AlorAir
COP 1.Great (3.1 L / kWh) iyo awoodda weyn a (140 raacday xaaladda AHAM).
2.It waa Energy Star-wadeenka, iyo CE ETL certified.
3.He 1400X qoreysa heerka buuq yar yahay a (in ka yar 58dba).
4.The Sentinel SLGR 1400X rido waxaa si gaar ah loogu talagalay dhulka hoostiisa, iyo shaqooyinka kale ee ka saarista qoyaan adag.
Spec & rakibaadda
Previous: Nadiifi Shield HEPA 550 Air Scrubber
Next: Ballaadhi ee Baaxada Codsiga Air fidmad la TurboDuct
Features oo kala duwan:
Waa maxay sababta dhulka hoostiisa had iyo suyuca?
Cayayaanka dulinka & xasaasiyadda
Meelahaas waxaa hoostiisa qabow oo qoyan, waa adag tahay in si qoto dheer biyo ka soo saarto. Xaaladdan oo kale, loo hubiyo in aad dhex rido daro taageere super awood badan si ay u sii wareegga hawada qalalan waqtiga oo dhan. Sentinel SLGR 1400X wareejin karaa 420 CFM hawada - oo ku filan si ay u qalalaan ilaa 8,000 sq Ft.. degaanka.
Sentinel SLGR 1400X Qoraalkan dehumidifier-
Achoo xasaasiyadda Basement rido
Achoo xasaasiyadda gurguuro Space rido
Allergybuyersclub Basement rido
Allergybuyersclub gurguuro Space rido
Aprilaire Basement rido
Aprilaire gurguuro Space rido
Basementsystem Basement rido
Basementsystem gurguuro Space rido
Rido Basement Fral
Fral gurguuro Space rido
Santa Fe Basement rido
Santa Fe gurguuro Space rido
Sylvane Basement rido
Sylvane gurguuro Space rido